सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज Batman v सुपरम्यान संस्करण? | Androidsis
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज Batman v सुपरम्यान संस्करण? किन होइन!
अर्को मार्च २ विश्वभरि सिनेमाघरोंमा रिलीज हुने छ डिसी ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा प्रत्याशित फिल्महरू मध्ये एक: ब्याटमैन v सुपरम्यान। र तपाइँलाई पहिले नै थाहा छ कि चलचित्र प्रमोट गर्नको लागि मार्केटिंग एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। र यो जहाँ छ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज।
र के यो कोरियाको नयाँ रिपोर्टले सोलमा आधारित निर्माताले सुरू गर्ने योजना बनाइरहेको छ भनेर दाबी गरेको छ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज ब्याटमैन v सुपरम्यान संस्करण। अर्को सामसु flag फ्ल्यागशिप प्रयोग गर्नु भन्दा कत्ति राम्रो पदोन्नति!
सामसु Galaxy ग्यालक्सी एस Ed एज ब्याटमैन विरुद्ध सुपरम्यान संस्करण केवल एक महिनामा मार्केटमा आउन सक्छ
अहिलेको लागि विवरणहरू एकदमै कम छन। हामीलाई थाहा छ कि यो मध्ये एक हुनेछ तीन विशेष संस्करणहरू जुन सामसु Samsungले यस वर्षको अन्तमा सुरु गर्ने योजना बनायो। यस तरीकाले सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज संस्करण ब्याटमैन v सुपरम्यान, अर्को सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज संस्करण शीतकालीन ओलम्पिक २०१ 2016 र एक कोरियन संगीत कार्यसँग सम्बन्धित तेस्रो मोबाइल फोन हुनेछ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज ब्याटमैन v सुपरम्यान संस्करण मार्च को अन्त्य सम्म बजार मा हिट छैनअप्रिल महिनामा ढिलाइ गर्न सक्षम हुँदै। यो धेरै सम्भावना छ कि यो फिल्मको आधिकारिक रिलीज मिति संग मेल खाँदैन।
के स्पष्ट छ कि यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज Batman v सुपरम्यान संस्करण यो आगामी फेब्रुअरी २१ मा प्रस्तुत गरिने छैन बार्सिलोनामा आधिकारिक सामसु event कार्यक्रमको बखत जुन विश्वलाई यसको नयाँ पुस्ता ग्यालक्सी एस and र ग्यालक्सी एस Ed एज देखाउँदछ।
पहिले नै हामीले गएको वर्ष देख्यौं सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज आइरन म्यान संस्करण, जुन कोरिया र चीनमा जारी गरिएको थियो। यस्तो सफलता थियो कि फोनहरू लिलामी साइटहरूमा $ १,००० सम्ममा बिक्री भयो। लगभग केही पनि छैन।
यस सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस Ed एज ब्याटम्यान v सुपरम्यान संस्करणको प्राविधिक विशेषताहरूको लागि, यसले पारम्परिक मोडेलको जस्तै फाइदाहरू हुनेछ। यस तरीकाले यो आशा गरिन्छ कि तपाइँको स्क्रिन प्यानल द्वारा गठन गरिएको छ .5.5..XNUMX इन्च वक्र OLED जुन २2560० x १1440० पिक्सेल (QHD) को रिजोलुसनमा पुग्नेछ, स्यामसंग Exynos 9980 820० प्रोसेसर वा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन XNUMX२० SoC माउन्ट गर्नु बाहेक।
निश्चित रूपमा यो विशेष संस्करणले एशिया छोड्दैन या त यो सम्भवतः सामसु process प्रोसेसर एकीकृत गर्दछ। यसको प्राविधिक विशेषताहरूको साथ जारी राख्दै, सामसु Galaxy ग्यालक्सी एस S एज ब्याटम्यान v सुपरम्यान संस्करण फिचर हुनेछ १ जीबी DDR4 प्रकार रैम, 32२ वा GB 64 जीबी आन्तरिक भण्डारणको विभिन्न कन्फिगरेसनहरू बाहेक, माइक्रो एसडी कार्ड ट्रे मार्फत विस्तार योग्य।
मुख्य क्यामेरा लेन्सको समावेश गर्दछ १IT मेगापिक्सल ब्रिटेल टेक्नोलोजीको साथ promises र me मेगापिक्सेल बीचको फ्रन्ट क्यामेरा हुनुको साथै उच्च-क्याप्चर क्याप्चरको प्रतिज्ञा गर्दछ। र हामी forget,5०० एमएएच ब्याट्री बिर्सन सक्दैनौं जसले फोन एकीकृत गर्दछ र त्यो नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस Ed एज ब्याटम्यान v सुपरम्यान संस्करण फोनको हार्डवेयरको सबै वजनको लागि जिम्मेवार हुनेछ।
जहाँ स्पष्ट भिन्नताहरू हुनेछन् जहाँ इन्टरफेसमा हुनेछ। तिनीहरूले आइरन म्यानको संस्करणको डिजाइनमा केही उल्लेखनीय भिन्नताहरू थिए, यो फिल्मको सुचित सुटको नजिकको चीज हुन, त्यसैले हामी आशा गर्न सक्दछौं। यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज Batman v सुपरम्यान संस्करण को एक पूर्ण अनुकूलित ईन्टरफेस गरौं।
संक्षेप मा, एक डरलाग्दो उपकरण जुन मलाई डर लाग्छ हाम्रो देशमा पुग्न सक्दैन। यद्यपि सामसुले अन्य सिमित संस्करणहरूसँग हेरे जुन सामसु theले यस समयमा जारी गरेका थिए, निश्चित रूपमा यस सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस Ed एज ब्याटम्यान विरुद्ध सुपरम्यान संस्करण ईबे मार्फत उपलब्ध हुने छ। अवश्य पनि, तपाइँको वालेटहरू तयार गर्नुहोस् किनकि व्यक्तिगत फोन भएको चुटकुले तपाईलाई अत्यन्त महँगो पार्छ।
र तपाइँसँग, तपाइँ सामसु Samsung ग्यालेक्सी S7 एज ब्याटम्यान v सुपरम्यान संस्करणको के सोच्नुहुन्छ? यदि यो अलि बढी मूल्यमा स्पेनमा आएको छ भने, १०० यूरो भन्नुहोस्, के तपाईं यसलाई खरीद गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 एज Batman v सुपरम्यान संस्करण? किन होइन!
LG Pay ढिला भयो र फेब्रुअरी २१ मा प्रस्तुतीकरणमा देखिने छैन
तपाइँको एन्ड्रोइडबाट नि: शुल्क सबै फुटबल हेर्न निश्चित अनुप्रयोग। (क्रोमकास्ट र स्क्रिन कास्टिंगसँग उपयुक्त)